သကွားစားသုံးခွငျး နှငျ့ ကငျဆာအန်တရာယျ | OnDoctor
သကွားစားသုံးခွငျး နှငျ့ ကငျဆာအန်တရာယျ
By Win Win May	 On Jun 27, 2018
သကြားစားသုံးခြင်း နှင့် ကင်ဆာအန္တရာယ်
လူတော်တော်များများ သိထားကြတာကတော့ သကြား အစာူများရင် သကြားပါတဲ့ အအေးတို့ အချိုမုန့် တွေ စားတာများရင် ဆီးချိုဖြစ်မယ် ဝလာမယ် ဒီလောက်ပဲ သိထားကြတာများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်သေးတာ ကိုသတိမထားမိပါဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ ကင်ဆာ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနှုန်း တက်လာစေပါတယ်။
ဒါဆို ကင်ဆာ အကုန် ဖြစ်စေတာလား?
အဲ့ဒီလိုလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ သကြားစားတာ များရင် အဓိက ဖြစ်စေတဲ့ ကင်ဆာတွေကတော့
1. esophageal cancer (အစာမျိုပြွန် ကင်ဆာ)
2. Small Intestinal Cancer (အူသိမ် ကင်ဆာများ)
4. သားဥအိမ်ကင်ဆာ (Ovarian Cancer) စတဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်လို သကြားတွေ က ကင်ဆာ ဖြစ်စေသလဲ?
1. Sucrose (စူးဂရို့စ်)
2. Fructose (ဖရပ်တို့စ်) စတဲ့ သကြားဓါတ်တွေ က ကင်ဆာ ဖြစ်စေပါတယ်။
Sucrose ဆိုတာ ဘာလဲ?
သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ သုံးသုံးနေကျ အိမ်သုံး သကြား ပါ။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီ အိမ်သုံး သကြားတွေ ထည့်လုပ်ထားတဲ့ မုန့် များကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း စားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကိတ်မုန့်၊ ကွတ်ကီး၊ brownie၊ ဒိုးနတ် နှင့် အခြားသော ကိတ်မျိုးစုံမှာ sucrose ပါပါတယ်။
ဒီလိုပြောလို့ လုံးဝ မစားရဘူးလည်း မဆိုလိုပါဘူး။ စားတဲ့ အကြိမ်အရေ အတွက် နဲ့ ပမာဏ ကို ထိန်းပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ဥပမာ – တစ်ပါတ်တစ်ခါ စားမယ့် အစား နှစ်ပါတ် မှ တစ်ခါ စားတာမျိုး၊ တစ်လနေမှ တစ်ခါ စားတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် အိမ်သုံး သကြားကို တစ်နေ့ ကို ဘယ်လောက် စားလို့ရလဲ ?
American Heart Association (AHA) ကထုတ်ထားတဲ့ Guideline အရ ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး အနေနဲ့ သကြား ကို တစ်နေ့ လက်လက်ဇွန်း ၆ ဇွနိး ထက်မပို သင့်သလို အမျိုးသားဂတစ်ယောက် အနေနဲ့ တစ်နေ့ ကို သကြား လက်ဘက်ဇွန်း ၉ ဇွန်း ထက်မပို သင့်ပါ။
ဒီလိုပြောလိုက်လို့လည်း တစ်နေ့ ကို သကြား ၆ ဇွန်း နဲ့ ၉ ဇွန်း မပြည့် ပြည့်အောင် ထိုသ်စားရနယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ sucrose အိမ်သုံး သကြား ကို သီးသန်း မစားနေရင်းပဲ ကို sucrose တွေ က ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်နေတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တချို့ အစား အစာတွေ မှာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိ နဲ့ မမြင်ရပေ မယ့် သကြား တွေ အများကြီးပါနေတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဒိုးနတ် မုန့်ပေါ် မှာ သကြား ဖြူးထားရင် လူတိုင်း က ဒီမုန့် မှာ သကြား အများကြီးပါတယ် လို့ သတိထားမိပေမယ့် ကွတ်ကီး တစ်ချပ် ဆိုရင် တော့ အပေါ် မှာ သကြားမဖြူးထားတဲ့ အတွက် သကြားများ လိမ့်မယ်လို့ သတိမထားမိကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ကွတ်ကီးဂတစ်ချပ် ဖြစ်ဖို့ အတွက် သကြား အများကြီး သုံးထားရပါတယ်။ ထို့အတူပါပဲ ကော်ဖီ ဖျော်ရင် သကြားနည်းနည်းပဲ ထည့်ကြတယ် ဆိုပေမယ့် နို့ဆီတွေ နို့စိမ်း တွေ ထည့်လိုက်တော့ နို့ဆီ နဲ့ နို့စိမ်းတွေ မျာပါတယ် များစွာသော သကြားတွေ က ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ကို ဝင်သွားပါတယ်။
ဒါကြောင့် သကြား ကို လက်ဘက်ဇွန်း ၆-၉ ဇွန်း အထိ စားလို့ရတယ် ဆိုပြီး မပြည့် မချင်း သကြားတွေ ထပ်ထည့်စားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ဒါဆို fructose ကကော ဘာလဲ?
သူကတော့ စားသောက်ကုန် လုပ်ငန်းတွေ မှာ သုံးတဲ့ သကြားတစ်မျိုးပါ။ အရမ်းချိုတယ်။ ဒါကြောင့် အချို ရည် လုပ်ငန်းတွေ၊ လေဖောင်းမုန့်တွေ၊ သကြားလုံး၊ တခြားသော အကြီးစား ထုတ်လုပ်တဲ့ မုန့် အချို တွေ၊ ရယ်ဒီမိတ် ကွတ်ကီးတွေ၊ ဘီစကွတ် တွေ မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြပါတယ်။ သူ့ကို တော့ တတ်နိုင်သမျှရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ သူ့ကိုဂရှောငိဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးကတော့ ရယ်ဒီမိတ် အချိုရည်တွေ ကိုရှောင်လိုက်ရင်တော့ တော်တော်လေး ရှောင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် အခုပြောတားတာ က ကင်ဆာ မဖြစ်အောင် သကြား ကို ထိန်းကွပ်စားပေးဖို့ပါ။ သို့သော်ဂကင်ဆာဖြစ်ပြီးသား လူနာတွေ မှာ တော့ ဟိုဟာ မကျွေးဂဒီဟာမကျွေး ဟိုဟညမစားနံ့ ဒီဟာမစားနဲ့ မလုပ်သင့်ပါ။ ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေ က နဂိုတည်း က အစားအသောက် ပျက်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ စားချင်တာလေး ကို ကျွေးပေးဖြိ့ပဲလိုပါတယ်။ သူတို့လည်း အလွန်အကျွံ မစားနိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် ကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေ ကတော့ ချိုတာလေး စားချင်တယ် ဆိုရင် လည်း ကျွေးပြီး အာဟာရပြည့်အောင် လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
လူတျောတျောမြားမြား သိထားကွတာကတော့ သကွား အစာူမြားရငျ သကွားပါတဲ့ အအေးတို့ အခြိုမုနျ့ တှေ စားတာမြားရငျ ဆီးခြိုဖွဈမယျ ဝလာမယျ ဒီလောကျပဲ သိထားကွတာမြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီထကျကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ ရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျသေးတာ ကိုသတိမထားမိပါဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ ကငျဆာ ရောဂါတှေ ဖွဈပှားနှုနျး တကျလာစပေါတယျ။
ဒါဆို ကငျဆာ အကုနျ ဖွဈစတောလား?
အဲ့ဒီလိုလဲ မဟုတျပါဘူး။ သကွားစားတာ မြားရငျ အဓိက ဖွဈစတေဲ့ ကငျဆာတှကေတော့
1. esophageal cancer (အစာမြိုပွှနျ ကငျဆာ)
2. Small Intestinal Cancer (အူသိမျ ကငျဆာမြား)
4. သားဥအိမျကငျဆာ (Ovarian Cancer) စတဲ့ ကငျဆာ ရောဂါတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
ဘယျလို သကွားတှေ က ကငျဆာ ဖွဈစသေလဲ?
1. Sucrose (စူးဂရို့ဈ)
2. Fructose (ဖရပျတို့ဈ) စတဲ့ သကွားဓါတျတှေ က ကငျဆာ ဖွဈစပေါတယျ။
သူကတော့ ကြှနျတျောတို့ သုံးသုံးနကြေ အိမျသုံး သကွား ပါ။ ဒါကွောငျ့ အဲ့ဒီ အိမျသုံး သကွားတှေ ထညျ့လုပျထားတဲ့ မုနျ့ မြားကို ထိနျးထိနျးသိမျးသိမျး စားသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ- ကိတျမုနျ့၊ ကှတျကီး၊ brownie၊ ဒိုးနတျ နှငျ့ အခွားသော ကိတျမြိုးစုံမှာ sucrose ပါပါတယျ။
ဒီလိုပွောလို့ လုံးဝ မစားရဘူးလညျး မဆိုလိုပါဘူး။ စားတဲ့ အကွိမျအရေ အတှကျ နဲ့ ပမာဏ ကို ထိနျးပေးဖို့ပဲ လိုတာပါ။ ဥပမာ – တဈပါတျတဈခါ စားမယျ့ အစား နှဈပါတျ မှ တဈခါ စားတာမြိုး၊ တဈလနမှေ တဈခါ စားတာမြိုး လုပျပေးပါ။
ဒါဆိုရငျ အိမျသုံး သကွားကို တဈနေ့ ကို ဘယျလောကျ စားလို့ရလဲ ?
American Heart Association (AHA) ကထုတျထားတဲ့ Guideline အရ ဆိုရငျတော့ အမြိုးသမီးတဈဦး အနနေဲ့ သကွား ကို တဈနေ့ လကျလကျဇှနျး ၆ ဇှနိး ထကျမပို သငျ့သလို အမြိုးသားဂတဈယောကျ အနနေဲ့ တဈနေ့ ကို သကွား လကျဘကျဇှနျး ၉ ဇှနျး ထကျမပို သငျ့ပါ။
ဒီလိုပွောလိုကျလို့လညျး တဈနေ့ ကို သကွား ၆ ဇှနျး နဲ့ ၉ ဇှနျး မပွညျ့ ပွညျ့အောငျ ထိုသျစားရနယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ sucrose အိမျသုံး သကွား ကို သီးသနျး မစားနရေငျးပဲ ကို sucrose တှေ က ခန်ဓာကိုယျထဲ ဝငျနတောပါ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ တခြို့ အစား အစာတှေ မှာ ကြှနျတျောတို့ မကျြစိ နဲ့ မမွငျရပေ မယျ့ သကွား တှေ အမြားကွီးပါနတေတျပါတယျ။
ဥပမာ – ဒိုးနတျ မုနျ့ပျေါ မှာ သကွား ဖွူးထားရငျ လူတိုငျး က ဒီမုနျ့ မှာ သကွား အမြားကွီးပါတယျ လို့ သတိထားမိပမေယျ့ ကှတျကီး တဈခပျြ ဆိုရငျ တော့ အပျေါ မှာ သကွားမဖွူးထားတဲ့ အတှကျ သကွားမြား လိမျ့မယျလို့ သတိမထားမိကွပါဘူး။ တကယျတော့ ကှတျကီးဂတဈခပျြ ဖွဈဖို့ အတှကျ သကွား အမြားကွီး သုံးထားရပါတယျ။ ထို့အတူပါပဲ ကျောဖီ ဖြျောရငျ သကွားနညျးနညျးပဲ ထညျ့ကွတယျ ဆိုပမေယျ့ နို့ဆီတှေ နို့စိမျး တှေ ထညျ့လိုကျတော့ နို့ဆီ နဲ့ နို့စိမျးတှေ မြာပါတယျ မြားစှာသော သကွားတှေ က ခန်ဓာကိုယျထဲ ကို ဝငျသှားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သကွား ကို လကျဘကျဇှနျး ၆-၉ ဇှနျး အထိ စားလို့ရတယျ ဆိုပွီး မပွညျ့ မခငျြး သကွားတှေ ထပျထညျ့စားတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူး။
ဒါဆို fructose ကကော ဘာလဲ?
သူကတော့ စားသောကျကုနျ လုပျငနျးတှေ မှာ သုံးတဲ့ သကွားတဈမြိုးပါ။ အရမျးခြိုတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခြို ရညျ လုပျငနျးတှေ၊ လဖေောငျးမုနျ့တှေ၊ သကွားလုံး၊ တခွားသော အကွီးစား ထုတျလုပျတဲ့ မုနျ့ အခြို တှေ၊ ရယျဒီမိတျ ကှတျကီးတှေ၊ ဘီစကှတျ တှေ မှာ တှငျတှငျကယျြကယျြ သုံးလာကွပါတယျ။ သူ့ကို တော့ တတျနိုငျသမြှရှောငျတာ အကောငျးဆုံးပါ။ သူ့ကိုဂရှောငိဖို့ အတှကျ အကောငျးဆုံးကတော့ ရယျဒီမိတျ အခြိုရညျတှေ ကိုရှောငျလိုကျရငျတော့ တျောတျောလေး ရှောငျပွီးသား ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
ကြှနျတျော အခုပွောတားတာ က ကငျဆာ မဖွဈအောငျ သကွား ကို ထိနျးကှပျစားပေးဖို့ပါ။ သို့သျောဂကငျဆာဖွဈပွီးသား လူနာတှေ မှာ တော့ ဟိုဟာ မကြှေးဂဒီဟာမကြှေး ဟိုဟညမစားနံ့ ဒီဟာမစားနဲ့ မလုပျသငျ့ပါ။ ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှေ က နဂိုတညျး က အစားအသောကျ ပကျြနတေဲ့ အခြိနျမှာ သူတို့ စားခငျြတာလေး ကို ကြှေးပေးဖွိ့ပဲလိုပါတယျ။ သူတို့လညျး အလှနျအကြှံ မစားနိုငျပါ။ ဒါကွောငျ့ ကငျဆာဝဒေနာရှငျတှေ ကတော့ ခြိုတာလေး စားခငျြတယျ ဆိုရငျ လညျး ကြှေးပွီး အာဟာရပွညျ့အောငျ လုပျပေးဖို့လိုပါတယျ။
ကလေးမြားတှငျဖွဈသော ဒိုငျရာပါ သို့မဟုတျ ခါးတောငျးကြိုကျထညျ ပှနျးခွငျး(Diaper Rash)
အမြိုးသမီးမြား နှငျ့ မီးယပျပွသာနာမြား အပိုငျး၂(မီးယပျသှေးလှနျခွငျး)